के तपाईलाइ थाह थियो (एभोकाडो) घिउ फल खाँदा हुने फाईदाहरु ! जान्नुहोस् – Complete Nepali News Portal
के तपाईलाइ थाह थियो (एभोकाडो) घिउ फल खाँदा हुने फाईदाहरु ! जान्नुहोस्
एभोकाडोलाई नेपालीमा घिउ फल भनेर चिनिन्छ । मध्ये अमेरिका र मेक्सिकोमा उत्पति भएको उष्ण प्रदेशीय यो एक राम्रो नगदे फल हो । यसको बैज्ञानीक नाम ‘पेर्से अमेरिकाना’हो । यो फलको सबै भन्दा बढी उत्पादन मेक्सिको पर्दर्छ । मेक्सिकोले बिश्वका धेरै देशमा यको निर्यात समेत गर्दछ ।
स्वास्थ्यवर्दक मानिएको एभोकाडो फल पुर्बिपहाडि जिल्ला धनकुटा हुदै नेपाल भित्रिएको मानिन्छ । बि.स. २०२८ सालमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीवास स्थापना गर्न अनुसन्धानको लागि आएको ब्रिटिस टोलिले यो फल धनकुटा भित्राएको थिए । समुन्द्र सतह बाट करिब २५०० मिटर सम्म यो फलकोे खेती गर्न सकिन्छ ।
पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ्यका लागि लाभदायक फ्याट र कार्बोहाइड्रेट हुने भएकाले एभोकाडो खानुका थुप्रै फाइदा छन् । विभिन्न अध्ययनमार्फत वैज्ञानिकहरुले यसमा अत्यन्तै फाइदाकारक तत्व हुने बताएका छन् ।
संसारकै फलमध्येमा धेरै पोषक तत्व भएको फलका रुपमा लिइने एभोकाडो नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटा सहित बिभिन्न जिल्लामा केही वर्ष अगाडिदेखि व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । एभोकाडो सेवन गर्दा हुने फाइदा थाहापाउन यो भिडियो हेर्नु होला ।